Onye na-ese ihe dị nsọ Raphael eweghachila ndụ ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ Italy » Onye na-ese ihe dị nsọ Raphael eweghachila ndụ ugbu a
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
dere Mario Masciullo - eTN Italy
Ịtali kwesịrị inweta ihe nrite maka nkwụsi ike n'ihu ọrịa COVID-19. Mkpebi siri ike nke mba ahụ imeri nsogbu ọrịa na-efe efe, nnabata na ntuziaka ahụike, na ntụkwasị obi na sayensị arụpụtala ihe.
taa, Italy, onye ndu n'etiti mba Europe dị ka obere n'okpuru usoro mmachi ọhụrụ, nwere ike ịtụgharị ihe omume etinyere na njikere.
N'ime ndị a bụ emume a raara nye Raphael n'ememe ncheta afọ 500 nke ọnwụ ya (1520-2020), nke ihe mberede coronavirus kpuchiri n'afọ gara aga.
Palazzo della Cancelleria nke narị afọ nke iri na ise ma mara mma (mpaghara nke Holy See na etiti Rome oge ochie) n'etiti ihe atụ kachasị mma nke ihe owuwu nke Roman Renaissance n'oge, ga-eme emume mgbede raara nye "Onye na-ese ihe Chineke" - nka. na ndu nke Raphael,
Ọkọ akụkọ ihe mere eme nke nkà Mirko Baldassarre, bụkwa onye na-ahụ maka ntụziaka nka, ga-akọwa ma kọwaa ụfọdụ ọmarịcha ihe osise nke onye na-ese ihe si Urbino, na-ejikọta ha na ntụnyere na ntinyeghachi nke ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị pụta ìhè na nke dị ịrịba ama nke ndụ ya dị mkpụmkpụ na nke siri ike. .
Akụkọ nke Maestro Baldassarre, nke kewara ụzọ atọ, ga-edobe ya site na arụmọrụ nke iberibe egwu Wolfang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydin, Johan Sebastian Bach na Antonio Vivaldi. Aurora na Rinaldi string quartet ga-eme nke a nke ọma site na ntule nke ihe nkiri atọ (Urbino-Rome-Florence) nke onye na-eme vidiyo bụ Mattia Enrico Rinaldi deziri na onyonyo nke ọrụ ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme kọwara.
Ihe omume ahụ, na ya mpụta mbụ ụnyaahụ na November19, reruns na November 20, 26 na 27 November ga-ewere ọnọdụ na Aula Magna nke akụkọ ihe mere eme oche nke Apostolic Chancellery (na nanị oghere), nke ka na-anabata ụlọ ikpe taa, na nke Lee Nsọ: Ụlọ mkpọrọ Apostolic, Apostolic Signatura (dicastery nke Roman Curia na bụ ụlọ ikpe kachasị elu nke iwu canon nke Holy See) na Roman Rota.
Tupu mmalite nke mmemme ahụ, a ga-ahapụ ndị sonyere ka ha gaa leta "ọnụ ụlọ nke ụbọchị iri abụọ" a ma ama nke nwere frescoes nke Giorgio Vasari sere na 1546 (ihe omume sitere na pontificate nke Pope Paul III Farnese).
Mario bụ ọkaibe na ụlọ ọrụ njem.
Ahụmahụ ya gbasara gburugburu ụwa kemgbe 1960 mgbe ọ dị afọ 21 ọ malitere ịgagharị Japan, Hong Kong, na Thailand.
Mario ahụla ka njem nlegharị anya ụwa na-etolite ruo ụbọchị wee gbaa akaebe
mbibi nke mgbọrọgwụ/akaebe nke gara aga nke ọtụtụ mba dị mma maka ọgbara/ọganiihu.
N'ime afọ iri abụọ gara aga, ahụmịhe njem Mario lekwasịrị anya na South East Asia na n'ikpeazụ gụnyere mpaghara mpaghara India.
Akụkụ nke ahụmịhe ọrụ Mario gụnyere ọtụtụ ọrụ na Civil Aviation
ubi mechiri mgbe emechara kik nke Malaysia Singapore ụgbọ elu dị n'Itali dị ka onye nkuzi wee gaa n'ihu ruo afọ 16 na ọrụ nke Sales /Marketing Manager Italy maka ụgbọ elu Singapore mgbe nkewa nke gọọmentị abụọ ahụ na Ọktoba 1972.
Akwụkwọ ikike nke onye nta akụkọ Mario bụ nke “National Order of Journalists Rome, Italy na 1977.
Ahapụ a Comment